QURBA JOOGA REER-SOMALILAND IYO FIKRADOODA SIYAASADEED
UJEEDO: TAAGEERO BUUXDA OO KU WAJAHAN BAYAANKA XISBIGA KULMIYE
Taariikh: May 27, 2003 | Faafin: May 30, 2003
Haddaan nahay qurbajooga Somaliland waxaan taageersannahay go'aanka uu gaadhay xisbiga KULMIYE kuna saabsan in miiska lasoo wada fadhiisto oo wada xaajood laysugu yimaaddo oo iyadoo wax shuruud ah lagu xidhayn lana yahay laba xisbi(KULMIYE iyo UDUB) oo siman oo aan cidina sidan xil qaran.
Sidaan la soconno Somaliland waxay ka guuraysaa nidaamka siyaasadeed ee Ku dhisan qaab beeleedka waxaanay u guurnaynaa nidaamka dimoqraadiyadda ee Ku salaysan habka talo wadaaga ee axsaabta badan. Waxaase nasiib darro ah In nidaamkii cusbaa ee loo guurayey ay carqalad ku noqotay xukuumadda Maanta talada haysaa. Waxay UDUB afduubtay masiirkii ummadda. Doorashadii lagalayna waxaa ku guuldarraysatay UDUB, waxaana ku guulaystay xisbiga KULMIYE marka xaqiiqada laga hadlayo. Waxaana marag madoon ah in natiijadii ay soo saareen guddida doorashadu subaxnimadii sabtidii 19 bisha April, ay caddaynaysay in xisbiga KULMIYE ku guulaystay tartankii, laakiin guddida doorashada lagu dirqiyey inay xaqdarro sameeyaan taasoo ay tirooyinkii is dhaafiyeen oo guul xaqdarro ah siiyey xisbiga UDUB!
Haddaba xaqdarrada halkaas ka dhacday waa mid ay xusi doonto taariikhdu, isla markaana dhicis ku ah hannaan socodka dimoqraadiyadda curdinka ah ee hadda dhulkeenna loo dhigay seeska cusub.
Xisbiga UDUB ee magacii xukuumadda Somaliland isticmaalayaa wuxuu isku dayeysaa innuu majiiro habaabiyo bulshada taasoo ay eedayno raqiisa usoo jeediso xisbiga KULMIYE. UDUB waxay kaloo isku dayeysaa inay danbabasto danbigay ka galeen shacbiga codkooda dhiibtay ee codka aqlibiyadda ku diiday in xisbiga UDUB ee hadda jirtaa talada sii hayso shanta sano ee soo socda. Waxaana UDUB ka footeeyey in ka badan 58% marka la qiyaaso dadkii codkooda dhiibtay doorashadii u danbaysay. Somaliduna waxay tidhaahdaa SAKAARO SAALO LA ARKAYEY AASTAA.
DOOBINTA RIYAALE IYO DAWLADDA LA SUGAAYO
iyo Duruufaha dhaqaale ku ceegagan: Waa faalladii toddobaadkan ee Maxamed Diridhaba Guji 23/5
Waxaa kaloo UDUB ku kacaysaa falal dhan ah shuuruucda dalka u yaal iyo xuquuqda adamaha, taasoo ay bilaabeen xadhig, cadaadis, xaalad abuur iyo xasilooni darro aan loo baahnayn; iyadoo xaddiday isu socodka caasimaddoo kale.
Waxay kaloo UDUB ayaamihii lasoo dhaafay bilaa sabab xabsiga ugu taxaabtay dadka aan taageersanayn siyaasadda dawladda UDUB ka soo jeeda. Shacbiga Somalilandna dhibaato badan bay usoo mareen xorriyaddan aan maanta haysanno mana istaahilaan in taliska UDUB kula kacdo afcaashii laga diiday xukuumaddihii ka horreeyey. Shacbiga Somaliland maaha caamiyo ee way la socdaan dhaq dhaqaaqa dhanka ka ah danta guud iyo muslaxa ee ay ku kacayaan xibsiga UDUB.
Waxaan u aragnaa gef laga galay dimoqraadiyadda iyo garsoorkaba in Golaha guurtida iyo golaha wakiiladu farageliyaan maxsuulka doorashada. Waxaanay ahayd in ciddii wax tirsanaysaa la sugto inta lagu dhawaaqayo natiijada kamadanbaysta ah subaxnimaddii Sabtidii. Laakiin taasi may dhicin dimoqraadiyaddii aan hiigsanaynayna xaqdarraa loogu walqalay. Somaladuna waxay tidhaahdaa WADAANTA ISHA KA QALOOCATAA, FAYLKAY LA TAGTAA.
Ugu danbayna haddaanu nahay dadka reer Somaliland ee qurbaawiga ah,waxaanu jecelnahay in lasaxo khaladkaas dhacay si taas loo helana waxaan madaxda xisbiga UDUB ka codsanaynaa inay aqbalaan baaqii uu soo jeediyey xisbiga KULMIYE ee ahaa in miiska lasoo wada fadhiisto iyadaan cidina sidan darajo si loogu helo xal waara khilaafka siyaasadeed hadda dalkeena ka jira. Waxaanu, sidoo kale, bulshada reer Somaliland ugu baaqaynaa inay ilaaliyaan nabadda oo ay iska dhawraan waxkastoo wax u dhimaaya xasiloonida. Ciddii aan ku qanacsanayn maxsuulkii doorashada ay dareenkooda ku muujiyaan qaab deggan oo miyir qabta.
Waxaan Eebbe ka baryeynaa inuu ina waajafiyo talada habboon ee
Cidkastaba u dan ah.
Baaqan waxaa wadajir usoo qoray Jaaliyadaha Reer Somaliland ee ku dhaqan dalalka hoos ku xusan.
Qoraalka Kala Xirii: